Uyokhipha isibhongo kwiLeopards uMcCarthy woSuthu - Impempe
Uyokhipha isibhongo kwiLeopards uMcCarthy woSuthu
April 4, 2021 Impempe.com
UClive Barker noBenni McCarthy
Kunezimpawu zokubambela iBlack Leopards igqubu kumqeqeshi waMaZulu FC, uBenni McCarthy ngaphambi komdlalo wala maqembu weDStv Premiership ngeSonto ngo 3 ntambama, eThohoyandou Stadium.
“Ngiyaxolisa kwiLeopards ngiyasibona isimo esinzima ebhekene naso kodwa nathi sinezethu izibopho ngakho-ke asiyele iphuzu kulo mdlalo kepha siwafuna egcwele,” kusho uMcCarthy sakusonga.
ILeopards iyona ekhiphe AmaZulu kwiNedbank Cup okuyiyona futhi imbangela yegqubu kuMcCarthy osakhala namanje ngokuthi uye eThohoyandou (kulo mdlalo weNdedbank) nesikimu esingaqinile ngokwanele njengoba ebelinyalelwe izithenjwa zakhe.
Kulo mdlalo obunguFebhuwari 27, iLeopards ewunqobe ngegoli likaMohamed Anas alishaye ngomzuzu ka-57, Usuthu luye kuwona luxhuga ngenxa yezinkinga ezahlukene kubadlali.
“Sesijahe ukuthi kuqalwe manje, kade saphumula. Sigcina ukuya eThohoyandou sibuye nomphumela ongemuhle. Kuhlukile nokho kulokhu ngoba siyakhona nabo bonke abadlali. Sigcina ukuya khona besibhekene nezinkinga eziningi ngakho kulokhu kuhlukile.
“Ngiya kulo mdlalo nabadlali engaziyo ukuthi ngeke bavume ukuthi kusale ngisho iphuzu kuwona okuyisimo esihluke kakhulu kunesedlule,” kusho lo mqeqeshi sakuqhosha.
Ngendlela awulungisele ngayo lo mdlalo uMcCarthy abadlali bakhe ubebajimisela ezinkundleni ezahlukene kuleli sonto ngenhloso yokuthi bafike eThohoyandou belunge macala onke.
“Ihluke kakhulu inkundla esiya kuyo kuna le esiyijwayele ngakho bekumqoka ukuthi sijimele ezinkundleni ezahlukene futhi ezithi azifane nale esiyodlala kuyo.
“Konke lokhu kuzokwenza singabi nalo ithuba lokucasha ngesithupha okuyisimo esivamise ukuvusa okuthile kubadlali bami,” kusho yena. Uthi kulokhu ngisho uhambo lokuya eThohoyandou ululungisele ngendlela.
“Amaphuzu yiwona esiphupha ngawo ngoba siyazi sifuna ukuqeda kuphi kule sizini. Abadlali bami bayakwazi lokho. Ngisho indlela esizohamba ngayo ihlukile kulokhu.
“Yebo umdlalo uzobanzima kodwa asikungabazi ukuthi sinawo amava okubuya namaphuzu egcwele yinqobo nje uma sizokwenza ngendlela efanele.
“Uma iLeopards ishaywa kuzobe kusho ukuthi iyasondelana nezembe. Lokhu kuyenza ibe yingozi. Kithi lo mdlalo umqoka njengefayineli yeChampions League ngoba nathi sinezethu izinhloso ngale sizini. Asinandaba nesimo abakuso kepha sibheke okuthinta thina,” kusonga lo mqeqeshi.
Previous Previous post: Wenze obekulindelekile uMpengesi ephinda exosha uMalesela
Next Next post: UKhune ubephelelwe wuthando lwebhola: Hunt